DAAWO: QAAB AAD U HABOON OO AAD XAASKAADA BIYAHA UGA KEENI KARTID ADIGA HORTAA. - iftineducation.com
iftineducation.com – Qaabka dumarka looga keensado in ay kaa hor biya baxaan.Hadda waxaan sheegaynaa qaababka ugu fiican ee loogu tago dumarka xiliga galmada si ay u dareemaan raaxo macaan badan.Ma doonaaysaa in mar walbo xaaskaagu ay kaa hor biyo baxdo? oo ay aad kuu jeclaato Hadaba dhinacyadaan hoos ku xusan ka mar.
Qaabka koobaad ee ugu muhiimsan: ee galmada ee dumarku giriirka ka qaadaan waa midda bahalku uu xoog u garaayo qankiirka kintirka hoostiisa ku yaallo xaaskaaga gadaal ayaad kaga imaanaysaa adiga oo farjiga uga galmoonaya iyadoo jiifta adiguna jilbaha ayaad ku istaagaysa, lugaheeda kor ayaad u taagaysaa. Markaad dhinacaan ka marayso ha iloobin inaad hoosta barkin ka geliso. markaad dhinacaan ka marto.
jirkeedu waxa uu soo daynayaa dheecaano fara badan kuwaaasoo aad ku arkayso inay kasoo burqanayaan xubinteeda taranka.. Qaabka labaad ee isna muhiimka ah : ee isaguna muhiimka ah waxaa weeye inay xaaska dhabacan u seexato adigana gadaal ayaad uga imaanaysaa. markaad dhinacaan ka marayso ha iloobin inaad barkin u galiso gumaarka ama caloosheeda qeybta hoose. dumarka hadii qaabkaan loogu galmoodo waxaa lagu yaqaan in dhidid jirkooda kasoo duxo mida kale waxay dareemaan kacsi nooca ugu sareeya riinkoodana meel fog ayaa laga maqlaa. Qaabka sadexaad: ee aan halkaan idin kugu soo bandhigayno waxaa weeye in ninka fariisto oo iyadunawaa ay kaa koranaysaa howshana waad isla wadaysaan. ku ciyaar oo taataabo naaseeheeda waxay ugu fiican marka leedahay futo weyn iyo naaso waaweyn ib dheer leh iyo barideeda si dareenkeedu u sii xoogaysto markaad halkaas marayso waxaad arkaysaa iyadoo macaan dartii la ooynaysaa, si xoog badanna way u biyabbaxaysaa. Waa Qaab sahlan oo nin walba sameyn.
Go’aanka Sweden ku gaartay inay celiso ku dhowaad 80,000 oo Qaxooti somali kujirto oo walaac laga muujiyay.
Raga Siigeesta Oo Halis aaney ogeen la helay -Daawo Video